VahÖmbey (08.08.1959 - 18.06.2022)
Accueil » Chronique » VahÖmbey (08.08.1959 – 18.06.2022)
Olon-kandeha, namela hafatra tsy niera : «Nomen’ialahy raharaha leitsy aho, Rôla, saingy voninahitra an-tsobiky ka tsy ho ataoko am-patra-bary. Tsy ho lahatenim-mpikabary anefa, ka ny fitiavana manentana no hitentina ny madilana ary hanitsy izay lesoka. Ny tena mantsy mikavihavia am-bava fa taizan’ny soratra, tsy mpikalo, tsy mpiantsa, fa Mpamalan-kira».
Raha teo Rôla, na izay anaran-kely fiantsoan’ny tsirairay azy, dia ho izay no niarahabany izay manatrika.
Mbola tamin’ny jona 2021, herintaona lasa katroka, izahay roalahy no nanome fotoana ny olona hoe «Rendez-vous dans dix ans» : saika hoe hanao «film long métrage», ka izaho no hanoratra ary ho azy ny scénario. Tsy hisy intsony izany «rendez-vous dans dix ans» izany, tsy hifamotoan-tsamy lavitra mandrakizay intsony iny akoholahy iny sy ilay masoandro iray iry.
Tsy ho voafehy kabary iray ny zava-bita sy ny lalana nodiavin’i Vahömbey. Maro ny zavatra nosahaniny, sehatra tsy voaisa no nahitana azy (karate, fanandroana, Oniversite, serasera, radio, politika, revolisiona vazimba), tsy mba niamboho adidy izy na dia sarotra takarina aza ny tena eritreriny sy ny fikasany marina, ka nahalasa saina hoe «nentin-javatra».
Vory maro, tonga rodobe nanotrona azy hatramin’ny fotoana farany indrindra, karazan’olona samy hafa, ka tanteraka ny nahaAmbohipihaonana an’i Vahömbey. Samy nandraisany avy ireo, samy nomeny isanisany ihany koa. Asa raha nampoizin’ilay zazalahy nandao tsy fidiny ny reniny sy ny rahalahiny roa mbola kely, ilay «Olona» nahavory vahoaka marobe, fony mbola teny am-bohitra, efa teny am-pandavenonana. Raha tsy nampoiziny, inoana fa nanome azy herim-panahy hafa namakivakiana ny fiainana. Raha tsy niaina iny zava-tsarotra loatra iny re, Rôla, Rabearison Roland Dieu Donné, ho nisy aingam-panahy namela ireo tsangambato tsy afaka am-bavantsika ? Iray amin’ireny, TSIAHY, izay i Bemaso zandriny no namorona ny tonony ary nametraka ny feony, no ho tononiko fa tsy sahiko hiraina sao Mamalan-kira indray VANF :
Aoka aloha aho hitomany Ô ry razako mitahy Ny fo mitempo feno sento Mangotika seranim-betso Aoka aloha hitanisa Irony lasa feno adrisa Omeo tso-drano aho hikoriana Ny andavanandroko ho zina Matoria fa aza maty Ny alaheloko tsy ho vatsy Soa fa nisy tsiahy Ho ango(F)om-panahy Hanovozon-tsoa, soa tokoa Ny diso tsy hanindroa Rôla, ilay mpitantara, ilay fatra mpitantara, ilay nahay nitantara, mbola nametraka ihany koa fehezam-panontaniana, asa raha hahitam-baliny indray andro, tahaka izay tsifambaramaro fonosin’ILAY MALALA :
Baba sy Neny nifand-amour Nanagno izaho ô Nirasa jôba fotsy malandy Mainty ngita olioly Tsy haihay miharoharo Zafiko zanako taranako Taranaky ny razako Ny fahafatesana tsy ren’ny maty, izay efa anaty fiadanan’ny afak’ady. Ny fahatesana kosa maharary ny velona, mbola mahatsiaro ny fotoana maro niarahana. Toa zary fohy loatra, satry mbola ho tohizana.
Tsy fendrofendro izany fa hantahanta. Raha revom-potaka, mantsy, rano no manala. Raha revon-teny, vava no manala. Raha revon’alahelo, ny havana no itarainana.
Valopolo taona mba ho Vazimba no nimatimatesana, leitsy Rôla, ary maro tokoa ny vazivazy nifanaovana, saingy sangy maherihery ihany ity hifampiantso Itompokolahy sahady ity.
Izahay tsy vahiny mitsapa alahelo ka vitan’ny tsetra tsy migogo : mety hitambolina tokoa ny «raho-mainty mahonena, mampandrotsaka tomany», araky ny tenin’Ny Avana Ramanantoanina. Ho velon-driaria an’arivon-taona anie leitsy ialahy !